Pierre-Emerick Aubameyang oo laga saaray kooxda Arsenal ee u safraysa Dubai. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Pierre-Emerick Aubameyang oo laga saaray kooxda Arsenal ee u safraysa Dubai.
Kabtankii hore ee kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lagu soo waramayaa in laga reebay xaflada safarka ee Gunners si ay ugu qaataan tababarkooda cimilada diiran ee Dubai.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Gabon ayaa laga saaray kooxda tan iyo markii laga xayuubiyay calaamada bishii hore, waxaana laga yaabaa inuu ciyaaray kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee maaliyada Arsenal.
Aubameyang ayaa ku soo laabtay London ka dib markii uu ka soo laabtay Koobka Qaramada Afrika ka dib cabsi caafimaad oo ka dhalatay COVID, in kasta oo ay jiraan warar kala duwan oo sheegaya in ciyaaryahankii hore ee Borussia Dortmund iyo Mario Lemina loo diray guriga dhibaatooyin kala duwan oo gaar ah.
Inkasta oo uu taageerayaasha u xaqiijiyay in qalbigiisu fiican yahay, haddana The Telegraph ayaa ku warameysa in Aubameyang – oo laga saaray kooxda kulankii isbuucaan ee Burnley – uusan u safri doonin Dubai kooxda inta lagu jiro fasaxa jiilaalka.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Aubameyang uu sii wadi doono inuu si shaqsi ah ugu tababarto London iyadoo lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo meel kale.
U wareejinta joogtada ah ee Saudi Arabia ayaa la filayaa in aanu soo jiidanaynin Aubameyang , kaas oo qandaraaskiisa Gunners uu haatan ka harsan yahay 18 bilood oo kaliya.
32 jirkaan ayaa ku faanay wadar ahaan 92 gool iyo 21 caawin 163 kulan uu u saftay Arsenal laakiin kaliya afar gool ayuu dhaliyay 14 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Toos: Maxaa ka socda Teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho?
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Teendhada Afiysoone ee ku dhex taalla gudaha xerada Xalane oo ay maanta ka dhaceyso doorashada madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya...
QISO DHAB AH OO KA DHACDAY BUURTA CARAFAAT OO DAREEN WAYN...
Maxaa maanta laga filaya shirka Muqdisho. Sidee la xaliyay qodobbadii la...
Dood ka dhalatay hadal uu Farmaajo ka sheegay Addis Ababa
Real Madrid oo xaqiijisay inay Aurelien Tchouameni ka saxiixatay heshiis lix...